Xiaomi Mi 6 vs Xiaomi Mi 5s | Vaovao momba ny gadget
El Xiaomi Mi 6 Izy io dia ofisialy aorian'ny fiandrasana elaela ary tsaho sy fivoahana marobe izay efa niaretantsika, saika hiteny aho amin'ny ampahany mitovy. Ny hainasan'ny mpanamboatra sinoa dia eo an-tampon'ny fitaovana finday marobe eny an-tsena, saingy alohan'ny hanombohana hividy azy io dia ampitahao amin'ny terminal avy amin'ny marika hafa tadiavinay hiatrika azy io miaraka amin'ny sainan'i Xiaomi farany.
Miresaka momba ny Xiaomi Mi 5s izay mbola hitohy eo an-tsena isika, ary mbola finday avo lenta ihany koa izay mbola tsy nahavita ny taona akory. RAHA tianao ny hahafantatra ny mampitovy azy ireo sy ny mahasamihafa azy dia tohizo ny famakiana satria ny Xiaomi Mi 6 vs Xiaomi Mi 5s na izay mitovy, duel eo an-tampon'ny tsena sinoa.
1 Ny fitoviana bebe kokoa noho ny fahasamihafana
3 Mendrika ny manova ny Xiaomi Mi 5s ho an'ny Xiaomi Mi 6 ve ianao sa mividy ny farany?
4 Ny mpandresy amin'ity duel ity; Xiaomi
Ny fitoviana bebe kokoa noho ny fahasamihafana
Ny fitoviana misy eo amin'ny Xiaomi Mi 6 sy ny Xiaomi Mi 5 dia betsaka ary afaka jerentsika azy ireo indray mipi-maso. Ary io dia samy manana ny efijery 5.15-inch mitovy ary miaraka amin'ny vahaolana mitovy. Mikasika ny endrika amam-bika, raha misy fiovana kely, indrindra ny fanjavonan'ny Jack 3.5 mm, fa ny mpanamboatra sinoa dia matetika manaraka ny tsipika mitovitovy amin'ny terminal rehetra izay tsy nandalo ihany koa tamin'ity indray mitoraka ity.
Ao anatiny no ahitantsika ireo tranga roa ireo a Processor Qualcomm, 835 amin'ny tranga Xiaomi Mi 6 sy 821 amin'ny tranga Xiaomi Mi 5s. Amin'ireo tranga roa ireo dia manana hery be isika hitsimbina ary bebe kokoa raha manana ny RAM 6GB hitantsika amin'ny fitaovana roa isika.
Raha ny momba ilay rindrambaiko, dia hahita fahasamihafana kely isika ary raha tsy izany dia amin'ny Xiaomi Mi 6 vaovao no ahitantsika ny sosona fanaingoana MIUI mihazakazaka amin'ny Android Nougat 7.0. Amin'ny tranga Mi 5 MIUI dia miasa amin'ny Android 6.0 izy io, na dia efa efa naely aza matetika fa mety ho tonga tsy ho ela ny fanavaozana.
Ireto ny fiasa feno sy ny masontsivana an'ireo fitaovana finday roa ireo;
Ireo no ilay manokana famaritana ny Xiaomi Mi 5s;
Pikantsary: ​​5.15 santimetatra miaraka amina vahaolana 1.920 x 1.080 teboka
Memory RAM: 4 na 6 GB arakaraka ny kinova voafantina
Fitoerana anatiny: 64 na 128 GB azo ahitam-bokatra amin'ny alàlan'ny karatra microSD
Fakan-tsary aoriana: sensor 12 megapixel
Fakan-tsary anoloana: -
Batterie: 3.200 mAh izay manome toky antsika fahaleovan-tena lehibe
Fifandraisana: USB 3.1 Type C
Rafitra miasa: Android 6.0 miaraka amin'ny sosona fanaingoana MIUI
Vidiny: 260-305 euro
Atorinay anao izao ny manokana famaritana ny Xiaomi Mi 6;
Processeur: Snapdragon 835 na inona no mitovy, maodely Qualcomm farany
Fahatsiarovana RAM: 6GB
Fitehirizana anatiny: 64 na 128 GB azo havaozina amin'ny alàlan'ny karatra microSD
Fakan-tsary any aoriana: solomaso roa megapixel 12 misy stabilizer efatra-axis
Fakan-tsary aloha: sensor 8 megapixel
Batterie: 3.350 5 mAh izay tokony hanome antsika fahaleovan-tena lehibe kokoa noho ny an'ny Xiaomi Mi XNUMXs
Rafitra miasa: Android 7.0 miaraka amin'ny sosona fanaingoana MIUI
Vidiny: 340-410 euro any Sina
Raha jerena ny toetra sy ny masontsivana, dia afaka mahatsapa bebe kokoa aza isika fa ny terminal dia mitovy, tsy misy fahasamihafana hita sy mahaliana.
Zava-dehibe ny manazava fa ny iray amin'ireo terminal roa dia tsy amidy amin'ny firenena rehetra ivelan'i Shina amin'ny fomba ofisialy, na dia mora kokoa aza ny mahazo azy ireo amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo, izay eny ary indrisy fa mazàna dia mampiakatra ny vidiny miaraka amin'ny izay manana finday avo lenta any amin'ny firenena aziatika.
Mendrika ny manova ny Xiaomi Mi 5s ho an'ny Xiaomi Mi 6 ve ianao sa mividy ny farany?
Tsy isalasalana fa io no fanontaniana lehibe apetraky ny maro amintsika amin'ny tenantsika aorian'ny nahitany izany ny Xiaomi Mi 5s sy ny Xiaomi Mi 6 dia mitovy tanteraka, mila mikaroka fatratra mba hahitana fahasamihafana mahaliana. Raha heverintsika ihany koa fa miharihary kokoa ny tsy fitovizan'ny vidiny, azontsika atao ny mamintina fa tsy mendrika ny hanovana ny Mi 5s ho an'ny Mi 6 vaovao.
Raha mitady fitaovana finday vaovao ianao, hanavao ny terminal efa taloha, tsy isalasalana fa ity Xiaomi Mi 6 dia tokony ho iray amin'ireo safidinao lehibe. Araka ny efa hitantsika, manolotra antsika famaritana avo lenta tena izy, fa miaraka vidiny izay ho any Chine eo anelanelan'ny 340 sy 410 euro. Midika izany, ohatra, fa raha tsy misy fahasamihafana marobe amin'ny Galaxy S8, dia mendrika 400 euro latsaka.
Anjaranao ny fanapahan-kevitra, fa raha te hanana smartphone tsara ianao ary hitahiry vola euro betsaka raha ampitahaina amin'ny terminal Samsung na Apple dia manana safidy roa ianao na Xiaomi Mi 5s na Xiaomi Mi 6, izay safidy roa lehibe.
Ny mpandresy amin'ity duel ity; Xiaomi
Ny duels rehetra dia tokony hanana mpandresy, fa amin'ity indray mitoraka ity, ny mpandresy dia tsy ho iray amin'ireo fitaovana finday roa mifanatrika, ary mitovy loatra izy ireo ka tsy tokony handinika ny iray amin'izy ireo ho mpandresy. Raha ny fahitako azy dia Xiaomi no mpandresy lehibe amin'ity duel ity izay nahavita nanolotra ny mpampiasa rehetra finday avo lenta toy ny Xiaomi Mi 6 sy ny Xiaomi Mi5 izay manome antsika famaritana mahazatra ny terminal misy ilay antsoina hoe avo lenta, nefa miaraka amin'ny vidiny izay lavitra ny vidin'ny terminal ao amin'ny izany faritra izany.
Mazava ho azy, angamba nanantena zavatra hafa bebe kokoa tamin'ny mpanamboatra sinoa isika ary indrindra indrindra amin'ny Xiaomi Mi 6, satria rehefa ela ny niandrasana dia nanolotra fantsona iray mitovy amin'ny iray efa teo an-tsena izy ireo, nanatsara ny processeur ary nitombo ny vidiny lehibe.
Iza no ho anao mpandresy amin'ity duel ity eo anelanelan'ny Xiaomi Mi 6 sy Xiaomi Mi 5s?. Lazao anay ny hevitrao amin'ny toerana natokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay, ary aiza no tianay hahalala ny hevitrao momba ny fitaovana finday an'ny mpanamboatra sinoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Xiaomi Mi 6 vs Xiaomi Mi 5s; duel eo an-tampon'ny tsena sinoa
Ny Xiaomi Mi 6 izao dia ofisialy miaraka amina endrika mahavariana ary tsy manana jack 3,5mm